About Us |Iyo kambani Ningbo Precise Colour Co., Ltd.
Precise Group yakatanga muna 2004, iyo inosanganiswa nemasangano matatu: Precise New Material Technology Co., Ltd, mono masterbatch uye pre-dispersed pigment producer;Ningbo Precise New Material, yakazvipira mukutumira kunze kwemavara efayibha, firimu, mapurasitiki nezvimwe;uye Anhui Qingke Ruijie New Material, imwe yeakanyanya kunyungudutsa dhayi uye vagadziri ve pigment muChina.Zvizere, tine gumi neshanu Q/C tsvimbo nevagadziri makumi matatu, mazana matatu evashandi vanoshanda, vane mazana matatu emazana ematani ezvinonyungudutsa dhayi, 6000 matani emono masterbatch uye pre-dispersed pigment, uye 8000 matani emhando yepamusoro pigment inoburitsa pagore.
Kutanga kubva pakutumira kunze dhayi zvinonyungudutsa uye yakakwirira kuita pigments, Precise haimbochinji kuzvipira kwedu kune epurasitiki zvinhu application nekuwedzera maapplication edu kune synthetic fiber, firimu uye dijitari inki jeti.Kuti tive nemutengo wakanyanya, bhizinesi redu rinowedzerwa kubva pakuumbwa kweruvara kuenda kushure-kurapwa, synchronously kubva pahupfu kuenda kune granular, kuitira kuzadzisa chinangwa chedu: kupa akachena uye ari nyore kushandisa mavara kupasirese.
Mavara edu nemadhayi akakwirira mukupararira uye kugadzikana.Kusina guruva zvakare chisungo chikuru chatiri kutevera, chine chaiyo-yekudyisa otomatiki!
Kunze kwekunyanya hunyanzvi mukuvandudza nekugadzirwa kwemavara, tinovaka dhatabhesi redu rekufananidza software.Vatengi vanogona kugadzira mavara zviri nyore nezvinhu zvedu uye software nekuchengetedza mutengo wakasarudzika uye nekukurumidza kushamwaridzana nevatengi vepasi.
Kunze kwemavara uye software, tinopa Q / C michina uye nzira kune vatengi vedu izvo zvinotibatsira kutaurirana zvakafanana.Yedu yakanyatso padyo nekugadzira sekugadzirwa kwakarongeka.
Kuve netiweki yakakura yekutengesa munyika makumi matanhatu kunotigonesa kukupa yedu yekupedzisira sevhisi iyo iwe yaunogona kutaura nesu pamaawa makumi maviri nemana zuva rega rega!
KUKOSHA KWEMVISION MISSION
kupa nyika yakachena uye mushandisi-ane hushamwari colorant
Simudzira 'Made in China'
Gadzira mavara akachena uye ari nyore kushandisa
Shungu, Chaizvo, Kusatya, Mhindumupindu, Govera